Ọ tumadi iji dị ka nri.
Melamine bụ a ọkara okokụre ngwaahịa na organic chemical ụlọ ọrụ na ọbụna Ọdịdị na nke ukwu ngwa; Ọ na-bụ-eji dị ka ihe na-emepụta melamine formaldehyde (MF) colophony. Inwe ndị ikike nke ọkụ na-eguzogide ọgwụ, mmiri na-eguzogide, na-ekpo ọkụ na-eguzogide, afọ-egbochi, electric aak-eguzogide ọgwụ, na-agba chemical ure, zuru okè mkpuchi ike, gloss ọkwa, na ígwè n'uche, na ezi thermal-ọnọdụ ike, ọ na ọtụtụ-eji na osisi, plastic, dope, akwụkwọ na-eme, akwa ụlọ ọrụ, akpụkpọ anụ, electric, na nkà mmụta ọgwụ, wdg
25 n'arọ p kpara akpa ma ọ bụ akwụkwọ-plastic akpa na Pee liner
Ọ na-ebe-etinyere maka n'imeso na-aṅụ mmiri anụ ụlọ, nsị na ulo oru mkpofu mmiri.
Ya siri ike ngwaahịa ọdịdị bụ odo ntụ ntụ ma ọ aja aja ntụ ntụ, ya bụ ụdị inorganic polima coagulant
Na wuru coal ụlọ ọrụ, ọ na-eji maka kewara coal na mmiri na magburu onwe mmetụta.
Weifang JS chemical co., Ltd bụ a zuru ụwa ọnụ ọgwụ trading na Nlụpụta ụlọ ọrụ headquartered na WEIFANG OBODO, CHINA. Na ụkpụrụ nke ime ihe n'eziokwu na-emeri-mmeri ahia, elu àgwà ozi na-adigide mmepe, Anyị eguzobewo ogologo oge na ike azụmahịa mmekọrịta ọtụtụ ama chemical ụlọ ọrụ n'ụlọ na mba ọzọ, ma merie oké nkwado na ntụkwasị obi si anyị ahịa.
Anyị Foto ekesịpde factory emi odude ke Binhai Economic-Technological Development Area (a mba akụ na ụba na nkà na ụzụ na mpaghara) nke Weifang, dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere a 2-ethylanthraquinone osisi nke 3000 tọn / afọ onwe ha ikike arịa amamihe, nke nwere esịmde elu na nkà na ụzụ larịị ke China. Ke adianade do, ọ bụ zuru ezu na-akwado na osisi, dị ka anhydrous aluminum trichloride osisi nke 2,500 tọn / afọ, polyaluminium ...
ANYỊ Factory ngwaahịa Kpọtụrụ US
Anyị Weifang JS chemical
Weifang JS chemical Co., Ltd. bụ a zuru ụwa ọnụ ọgwụ trading na rụpụta ụlọ ọrụ headquartered na WEIFANG OBODO, CHINA. Na ụkpụrụ nke ime ihe n'eziokwu na mmeri-mmeri ahia, elu àgwà ozi na-adigide mmepe.
Ọ nwere ọkachamara R & D na imewe ike, nkà dị ukwuu n'ichepụta ike na nke zuru okè mgbe-sales ọrụ usoro.
JS Trading ga-mgbe niile rube isi na-arụ ọrụ na nkà ihe ọmụma nke "Ka n'ọrụ Obi ụtọ, Ka Clients Ịga nke Ọma, na-eme ka Society".
Water Ọgwụgwọ Polymers , molekụla myọ Desiccant , Hypophosphorous Acid , sodium Stannate , 30% Polyaluminium chloride , Pac For Water Treatment,